lundi, 12 décembre 2016 10:30
Androany no napetraka amin’ny fomba ofisialy any amin’ny distrikan’Ambatondrazaka i Ranarison Desiré, lehiben’ny faritra vaovao ao Alaotra Mangoro. Minisitry ny governemanta Mahafaly miisa telo no tonga nanatanteraka izany fametrahana izany any an-toerana ; dia ny minisitra Rakotovao Rivo, Rafidimanana Narison ary ny jeneraly Paza Didier Gérard.
12 desambra : Feno 67 taona i Marc Ravalomanana
Mitsingerina androany ny faha 67 taonan’Atoa Marc Ravalomanana, filoham-pirenena teo aloha. Ny faha 12 desambra 1949 izy no teraka tao Imerikasinina.
lundi, 12 décembre 2016 01:04
Nisento tokana izy no nisaotra an'Andriamanitra fa tsy nisy korontana
Talohan'ny nisarahana tamin'ny fitsidihana an'i Augustin Andriamananoro izay voatana ao amin'ny Toby Zandarimaria Miarinarivo, dia nitondra ambavaka an'i Augustin sy ireto Zandary ny Solotenan'ny délagasionina. Rehefa vita ny tonom-bavaka, dia nisento mafy ity Zandary lehiben'ny Toby, no niteny hoe, "Misaotra anao Andriamanitra fa nilamina tsara tsy nisy korontana teto".
samedi, 10 décembre 2016 12:02
Ladoany Toamasina : Kaontenera 47 sy fiara 35 hatao lavanty
Ireo kaontenera sy fiara tonga teo anivon’ny seranan-tsambon’i Toamasina tao anatin’ny roa volana no mihoatra nefa tsy nalaina na navoakan’ny tompony ka lany fetr’andro ara-dalana hipetrahana ao no hatao lavanty amin’ny 12 desambra 2016 izao.Miisa 47 ireo kaontenera ka manodidina ny 500.000 Ariary hatramin’ny 600 tapitrisa Ariary ny tombam-bidin’ny entana amin’izany. Miisa 35 ny fiara ka 200.000 Ariary ka hatramin’ny 50 tapitrisa Ariary ny tombam-bidy.
samedi, 10 décembre 2016 11:54
Arema : Andrasana ny fahatongavan’ny Amiraly Didier Ratsiraka eto Toliara anio
Toliara no hamarana ny fankalazana mitety faritra ny faha-40 taonan’ny antoko Arema. Ho avy eto an-drenivohitry ny Faritra Atsimo Andrefana anio ny filoha teo aloha sady mpanorina ny antoko Didier Ratsiraka. Ity no dia voalohany hataony aty atsimo taorian’ny nandaozany an’i Madagasikara tamin’ny 2002, sy ny niverenany an-tanindrazana ny 24 novambra 2014. Manomana fitsenana miavaka azy ny eto Toliara, hisy karnavaly mihodidina ny tanàna aorian’ny fahatongavany, mialoha ny lanonana ao amin’ny « Espace Père Barré » Sanfily.
Toamasina : Amperin’asa ny « Police des mines »
Taorian’i Toliara dia nampahafantarina ny zoma 9 desambra 2016 ny fisian’ny « Police des mines » eto Toamasina. Tonga nametraka azy teto an-toerana ny minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika, Zafilahy Ying Vah. Zandary sy Polisy no mandrafitra ny« Police des mines », izay hisahana ny fampanarahan-dalana sy fanenjehana ary fanadihadiana ireo zatra ny gaboraraka. Soamanjaka Edmond no Tale jeneraliny, ary Amable André Benjamin Tale provinsialy no mpanara-maso eto Toamasina.
samedi, 10 décembre 2016 11:35
Antsalova : Nanao totohondry imasom-bahoaka ny lehiben’ny Polisy
Lonilony efa niotrika, fa ny fandefasana mozika mitatatata nataon’ilay mpitandro ny filaminana amin’ny fotoana atoandro mba fakan’ny olona aina no nampipoaka ny ady tamin’ny mpifanolobodirindrina aminy, ary niafara tamin’ny ady totohondry. Nitangorona ny olona satria anivon-tanàna no nitrangany, amin’izay indray ka ny lehiben'ny mpitandro filaminana ity rafitra manao moraingy namory vahoaka ity.
vendredi, 09 décembre 2016 22:14
Antsohihy : Oram-be androany
Nanorana be teto Antsohihy, renivohitry ny Faritra Sofia androany. Mahalana no nisy orana teto an-toerana tato anatin’ny telo volana izao. in-dray mandeha no nisy orana tamin’ny volana oktobra, toy izany koa tamin’ny novambra dia ity androany ity indray.
vendredi, 09 décembre 2016 13:40
Mahajanga : Miakatra ny vidin’entana eny an-tsena
Atomotra ny fety ka dia manararaotra mampakatra ny vidin-javatra eny an-tsena ny mpivarotra. Mitentina 15.000 Ariary ka hatramin’ny 25.000 Ariary ny vidin’ny akoho amam-borona iray ary hatramin’ny 60.000 Ariary kosa ny vorontsiloza sy ny gisa. Mitentina 10.000 Ariary ny hen’omby ary 9.000 Ariary ny henan-kisoa. Etsy andaniny dia manambana ny hampakatra ny sarandalana ho 500 Ariary koa ny mpitatitra taksibe eto Mahajanga tampon-tanàna alohan’ny krismasy.
vendredi, 09 décembre 2016 11:26
Ambositra : Miaina delestazy nanomboka halina
Tapaka manomboka amin’ny 11 alina ny jiro eto Ambositra ary tsy miverina mirehitra raha tsy amin’ny 8 ora maraina. Nanomboka halina io fanapahan-jiro io, izay tampoka tamin’ny mpanjifa ihany.
Page 236 sur 354